Real Madrid oo kula dagaalameysa kooxda Manchester United saxiixa difaaca reer England Harry Maguire – Gool FM
Real Madrid oo kula dagaalameysa kooxda Manchester United saxiixa difaaca reer England Harry Maguire
(Real) 30 Luulyo 2018. Real Madrid ayaa soo gashay tartanka loogu jiro saxiixa daafaca kooxda Leicester City Harry Maguire inta lagu jiro suuqan kala iibsiga ee xagaaga, sida laga soo xigtay wargeysyada Ingiriiska.
25 jirkan u ciyaara Leicester City ayaa lala xiriirinayay kooxda reer England Manchester United kadib markii uu adeegiisa codsaday tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho.
Sida ay wararku xaqiijinayaan difaaca reer England Harry Maguire ayaa rajeenaya in maamulka kooxda Leicester City ay u ogolaadaan inuu baxo, sababa la xiriira inuu xiiseenayo u dhaqaaqista koox weyn sida Manchester United oo kale.
Laakiin wargeyska “Daily Star” ayaa sheegtay in Manchester United ay ku adkaan doonto xaalada kadib marka ay loolanka qeyb kasoo noqotay Real Madrid xiisaha Harry Maguire.
Wargeyska reer Spain ee “Don Balón” ayaa wuxuu sheegay in macalinkka Real Madrid Julen Lopetegui uu ka codsaday maamulka kooxda inay u sameeyaan saxiixa Harry Maguire, kadib bandhigiisa wanaagsan ee koobka aduunka 2018.
Manchester United ayaa £ 50m ka gudbisay saxiixa difaaca reer England Harry Maguire, waxaana maalmaha soo aadan la sugayaa dalabka la filayo inuu ka yimaado kooxda Real Madrid.
Jose Mourinho iyo maamulka Manchester United oo isku dhacay (Maxaa la isku haayaa?)
Tababaraha Bayern Munich oo go'aamiyay mustaqbalka Robert Lewandowski